AASraw iri pamwe neyekushongedza uye kugona kugadzira kubva giramu kusvika kuhuwandu hweTrostostane Powder (13647-35-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable yemhando yekudzora system.
Kuchengetedza: Dry, rima uye pa 0 - 4 C kwenguva pfupi (mazuva kusvika mavhiki) kana -20 C kwenguva refu (mwedzi kusvika kumakore).
Trilostane Powder (13647-35-3) Dnhoroondo:
Trilostane poda inhibitor ye3β-hydroxysteroid dehydrogenase inoshandiswa pakurapa kweCushing's syndrome uye chepfungwa hyperaldosteronism. Aya ndiwo matambudziko maviri apa kuwanda kweiyo corticosteroid mahormone inogadzirwa mumuviri. Corticosteroids yakakosha kuti muviri ugone kushandisa macarbohydrate, mafuta nemapuroteni uye nemhinduro yakajairwa yekunetseka. Izvo zvinodikanwa zvakare kuitira kudzora kwemunyu uye chiyero chemvura mumuviri. Trilostane poda inobatsira kudzivirira kugadzirwa kwe corticosteroids, kudzora zviratidzo zvinosangana neiyi kusagadzikana.
Ichangobvumidzwa muna2008 kurapwa kwechirwere cheCushing (hyperandrenocorticism) imbwa. Ndiwo wekutanga mushonga unobvumidzwa kubata zvese pituitary- uye adrenal-inomira Cushing's imbwa. Uyu mushonga wekunyorerwa unoshanda nekumisa kugadzirwa kwe cortisol mu adrenal glands.